Featured – Page2– Bikalpa Khabar
Suman	 Jun 17, 2018
निजि विद्यालय बन्द गर्ने कि सरकारी विद्यालयलाइ सुधार्ने ?
Basanta	 May 22, 2018
Basanta	 May 17, 2018
Basanta	 Apr 26, 2018
- वसन्त अधिकारी के तपाइको ज्याकेट खोस्ने अधिकार मलाइ छ ? के मैले तपाइको हातको घडी खोस्न मिल्छ ? के तपाइँसंग भएको कुनैपनि सामान तपाइको सहमति बिना बलजफ्तिपुर्वक म लिन सक्छु ? पक्कै पनि मलाई यसो गर्ने अधिकार छैन, न त यो अधिकार तपाई मलाइ दिनु…
© 2018 - Bikalpa Khabar. All Rights Reserved.